SMS mala’isku Guursadaa Mise waa La’isku Furaa..? qosol badanaa | Dadaab Refugee Camps
SMS mala’isku Guursadaa Mise waa La’isku Furaa..? qosol badanaa
April 9, 2012 | Filed under: Arimaha Bulshada,Jaceylka iyo Dhalinta Manta,Sheekooyin | Posted by: admin Guurka casriga ee Somalida wuxuu cagta geliyay ciriftii ugu dambeeysay ee la yaabka dunida,tani waa sheeko xiiso badan oo aan jecleeystay inaan qoro.
Nadiifo waa gabadh ku nool Magaaladda Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan xaafadda Somalida ku badan tahay ee Islii,
Nadiifo marka dhinaca quruxda laga eego dooqeeyga waa gabadha labaad ee gabdhaha Somalida Nairobi ugu quruxda badan,maashaa allaah, ilaah ku maneeystay 32 xubnood ee dumarka laga daawado iyo labada soo raacda,oo ah qosolka iyo codka raxmada leh.
Ibrahim waa 38 jir degaan ahaan ku nool Magaaladda Toronto ee dalka Canada.marka la waydiiyo dhalashadiisa wuxuu afkiisa u bartay inuu yiraa “ I am Somali Canadian”
Maalmahii Ibrahim joogay Nairobi waxay u ahayd jawi xasuus leh,wuxuu hiifay waqtiga iyo waayaha isdabaraya maxaa yeelay Nadiifo wuxuu bartay toban maalmood xilli ay ka dhiman tahay ticket-kiisa laabashada.
Aabahaa ma nool yahay mise waa dhintay,hadii uu nool yahay halkee joogaa?
Nadiifo oo yara xishooneysa ayaa ku tiri” Sheekh adigoo raaliya sidee nin iigu mehrin kartaa bilaa Marqaati?
Sheekhii ayaa u yara qoslay,isagoo leh Maashaa allaah,waa su’aal fiican Nadiifo! Wuxuu u raaciyay,dunida horumar beey gaartay,SMS-ka ayaa noogu filan marqaati ee waxaa lagaa doonayaa inaad SMS-ka xafidid.
Nadiifo hadalkii waa uu ka dhamaaday,waxay ku koobtay,waa mahadsan tahay Sheekh,kadibna waxay u qortay jawaabahii uu ka sugayay.
Sheekhii ayaa Ibrahim u qoray,waxaan kaa doonayaa inaad iga aqbashid,Nadiifo hebel hebel,oo meherkeedu yahay intaas,inaan kugu nikaaxsho,fadlan hadii aad aqbashay,aniga iyo Nadiifo noo soo wada dir SMS aad nagu leedahay,waan aqbalay Sheekh,waxaana u ahay diyaar inaad igu nikaaxiso?
Fariin qoraaleedka Sheekha waxaa wada helaya Nadiifo iyo Ibrahim,markasta waxaa sharuuda in qofka fariinta uu dirayo labada qof u wada diro,
Ibrahim Sheekha wuxuu u qoray,HAA SHEEKH WAAN AQBALAY INAAD IGU MEHRISID IYO MEHERKEEDABA?
Sheekhii ayaa Nadiifo soo weydiiyay,haye Nadiifo waxaan kaa rabaa inaad ii soo qortid,ANIGOO AH HEBLAAYO HEBEL,waxaan kuu dhiibtay walaayadeeyda,si aad iigu nikaaxisid Ibrahim hebel hebel.
Nadiifo intii Sheekha Waydiistay ayey u dirtay,kadibna waxaa u soo dhacay,SMS uu Sheekha ugu hambalyeeynaayo Ibrahim iyo Nadiifo,kuna leeyahay maashaa allaah,guurkiina waa hagaagay Seey iyo Marwadiis baad tihiin,allaha isu kiin barakeeyo.
Ibrahim iyo Nadiifo haasawahoodii Jaceyl wuxuu isu bedelay mid qoys,waxay xaq u yeelatay biil joogtaa inuu bil waliba u diro.
Lix bilood kadib wuxuu Ibrahim u tegay gacalisadiisa ay hiloowga iyo xiisaha xoogan isu qabaan ee Nadiifo.
Shan iyo toban maalmood markii uu Ibrahim ,Nairobi la joogay Nadiifo ayuu Toronto dib ugu dhoofay laakiin maxaa dhacay?
SMS,Fariin qoraaleed ayuu Ibrahim u soo diray Nadiifo,telefoonkii ayey haabatay,waa fariintii ugu horeeysay ee gacaliyaheeda ama ninkeeda ay ka hesho tan iyo markii uu Nairobi uga tegay.
Akhris ayey ku biloowday” Anigoo ah,Ibrahim Hebel hebel,waxaan halkaan kuugu cadeeynayaa inaan laba dalaaqo kugu furay adigoo ah,Nadiifo hebel hebel,sidaas daraadeed waxaan kuu rajeeynayaa guul iyo Mustaqbal wanaagsan,hana ku mashquulin sababta laakiin ku qanac inuu yahay go’aan ka turjumaya rabitaankeeyga shaqsi.
Nadiifo yaab , amakaag iyo film horara ayaa u shidmay,waxay ku waalatay SMS miyaa la isku furaa? Sheekh hebel walaalayaaloow ii waydiiya.
Nadiifo oo xanaaq badan ka muuqdo,aadna uga soo horjeeda in saaxiibkeed Ibrahim SMS ku furo,ayaa iigu timid Hotel aan ka deganaa Nairobi,waxaa la socday sedex gabdhood,waxay igu tiri” Dahirow ninkii I qabay ee sheekadiisa aan kaaga sheekeeyn jiray sidaan isku guursanay,wuxuu ii soo diray SMS,wuxuuna igu dhahay waan ku furay,ee walaaloow SMS MA LA ISKU FURI KARAA? Sheekh Maxamud Aw Cabdulle Cariif ii weydii!! Inta aan yara qoslay,ayaan ugu jawaabay “ SMS MALEEYSKU GUURSAN KARAA?
Shactaro iyo qosol ayey isu bedeshay sheekadii,HAA ayey iigu jawaabtay Nadiifo,waxay igu tiri” heblaayo iyo heblaayo iyo heblaayo ayaa SMS lagu guursaday oo guurku waa niyadda uun walaalow”
Sheekhii ayaan telefoon la tiigsaday anigoo rumeeystay in gabdha badan SMS lagu guursaday laakiin Nadiifo tahay gabadhii ugu horeeysay ee SMS lagu furo.
Sheekha ayaan waydiiyay Sheekhoow SMS ma la isku furaa mase la isku guursan karaa?
Sheekh Cariif inta cabaar aamusay,ayuu yiri “ Tana ma I sugeeysay,kheeyr allaha idin siiyee,su’aashaan waligeey ma filane,bal maalmo I siiya,aan baaris ku sameeyee xaga diinta!!
Dhacdooyinka Bulshada Kala Soco www.dadaabcamps.com